Ciyaaraha caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka: Salsa ilaa bachata | Wararka Safarka
Luis Martinez | 05/05/2021 12:08 | America, dhaqanka
Ciyaaraha caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka ayaa asal ahaan sooyaalkoodii hore soo maray. Waxaan ugu yeeraynaa dhul ballaaran oo ay ku jiraan dhowr quruumood oo aad loogu maydhay Badda Caribbean iyo waliba jasiiradaha ku xeeran qaybtan Badweynta Atlantik. Kuwa ugu horeeya waxaa ka mid ah Mexico, Colombia, Nicaragua o Panama, iyadoo laga hadlayo kan dambe, waxaan ka xusi karnaa ummadaha sida Cuba (haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato caadooyinka dalkan, halkan guji), Jamhuuriyadda Dominican o Jamaica.
Sidaa darteed, qoob ka ciyaarka caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka ayaa ah kuwa looga dhaqmo dhulkaas ballaaran. Waqtigaan la joogo, iyagu waa natiijada isku dhafka saddexda saameyn: hooyo, Isbaanish iyo Afrikaan, tan dambe waxaa keenay kuwii addoonsiga u haystay meeshii ay u socdeen. Xaqiiqdii, qaar badan oo ka mid ah qoob-ka-ciyaarkan ayaa la dhigay dhammaadkii maalmihii adkaa ee addoommada iyo shaqaalaha xorta ah labadaba. Laakiin, annaga oo aan ku sii dheerayn, waxaan kuu sheegi doonnaa qaafiyadaas.
1 Qoob-ka-ciyaarka caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka: noocyo aad u tiro badan
1.1 Salsa, qoob-ka-ciyaarka Caribbean-ka
1.2 Merengue, wax ku biirinta Dominican
1.3 Mambo iyo asal ahaan Afrika
1.5 Cumbia, hidaha Afrika
1.7 Qoob-ka-ciyaarka kale ee caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka ugu caansan
Qoob-ka-ciyaarka caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka: noocyo aad u tiro badan
Waxa ugu horreeya ee ka dhex muuqda qoob-ka-ciyaarkan ayaa ah tirada badan ee iyaga jira. Tusaale ahaan, waxa loogu yeero waxay ku jiraan madow, oo asal ahaan ka soo jeeda jasiiradda Santa Lucia; ah puja Kolombiya, the sextet ama iyagu waa palenquero ama the durbaan yar, ku dhashay Panama. Laakiin, marka la eego suurtagal la'aanta in la joojiyo dhammaan qoob-ka-ciyaarkan, waxaan kuu sheegaynaa kuwa ugu caansan.
Salsa, qoob-ka-ciyaarka Caribbean-ka
Salsa, qoob ka ciyaarka caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka heer sare
Si xiiso leh, qoob ka ciyaarka ugu caansan ee Kariibiyaanka ayaa caan ka noqday New York laga soo bilaabo lixdamaadkii qarnigii la soo dhaafay. Waxay ahayd markaa fannaaniinta Puerto Rican oo uu hoggaaminayo Dominican Johnny pacheco caan ka dhigay.
Si kastaba ha noqotee, asalkiisu wuxuu dib ugu noqdaa waddamada Caribbean-ka iyo gaar ahaan Cuba. Xaqiiqdii, qaafiyaddeeda iyo laxankeeduba waxay ku saleysan yihiin muusig dhaqameed ka socda dalkaas. Gaar ahaan, qaabkeeda qaafiyadda ayaa ka timaadda waa cuban laxankiina waa laga qaatay iyagu waa montuno.
Qaar badan oo ka mid ah qalabkiisa sidoo kale waa Cuba. Tusaale ahaan, bongo, pailas, güiro ama cowbell Kuwaas oo ay ku kaabayaan kuwa kale sida biyaano, turumbooyin iyo labo baas. Ugu dambeyntiina, is-waafajinteedu waxay ka timaaddaa muusikada yurubiyanka.
Merengue, wax ku biirinta Dominican
Merengue waa qoob ka ciyaarka ugu caansan Jamhuuriyadda Dominican. Waxay kaloo u timid Mareykanka qarnigii la soo dhaafay, laakiin asalkiisu wuxuu dib ugu soo laabtay sagaal iyo tobnaad mana cadda. Si aad u badan oo ay jiraan halyeeyo dhowr ah oo ku saabsan.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan ayaa sheegaya in geesi weyn oo waddani ah uu ku dhaawacmay lugtii uu ka soo horjeeday Isbaanishka. Markii uu ku noqday tuuladiisii, deriskiisii ​​ayaa go’aansaday inay u dhigaan xaflad. Oo markay arkeen inuu dhutinayo, waxay doorteen inay ku daydaan isaga oo cayaaraya. Natiijadu waxay noqotay inay lugaha jiiteen oo miskaha dhaqaajiyeen, laba astaamood oo caan ah oo ku saabsan meringue choreography.
Hadday run tahay iyo in kale, waa sheeko qurux badan. Laakiin xaqiiqda ayaa ah in dhaantadan ay noqotay mid ka mid ah kuwa ugu caansan adduunka, illaa heer la shaaciyay Dhaxalka Dhaqanka ee aan la taaban karin ee Bani-aadamnimada by UNESCO.
Waxaa laga yaabaa in xaqiiqda dhabta ahi ay tahay dhaqanka asalka u leh asalka beeraleyda gobolka Cibao The inay u iibgeyn doonaan wax soo saarkooda magaalooyinka. Waxay ku hoydeen hoyga, midkoodna waxaa la oran jiray Perico Ripao. Taasi waxay ahayd meeshii ay isku maaweelinayeen iyagoo soo bandhigaya qoob ka ciyaarkan. Sidaa awgeed ayaa loogu yeedhay wakhtigaas iyo aagga si hufan Perico Ripao.
Sida muusiggiisa, waxay ku saleysan tahay saddex qalab: shaashadda, gira iyo tambora. Ugu dambeyntiina, waxaa sidoo kale xiiso leh in qofka ugu weyn ee mas'uulka ka ah hagaajinta iyo horumarka meeriska uu ahaa kaligii taliye. Rafael Leonidas Trujillo, dhamaan taageerayaasha tan waa kuwa abuuray iskuullada iyo muusikada si kor loogu qaado.
Mambo iyo asal ahaan Afrika
Ka mid ah qoob ka ciyaarka caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka, tan ayaa lagu soo saaray Cuba. Si kastaba ha noqotee, asalkeeda waxaa loo aaneynayaa addoommadii Afrika ee yimid jasiiradda. Si kastaba xaalku ha ahaadee, nooca casriga ah ee qoob-ka-ciyaarkan waxaa u sabab ah Kooxda Arcaño soddonkii qarnigii la soo dhaafay.
Qaadashada Cuban danzón, si dhakhso leh ayey u soo bandhigtay oo waxay u soo bandhigtay isku duubni muusikada iyada oo lagu darayo waxyaabo ku saabsan nooca montuno. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon laheyd reer Mexico Damaso Pérez Prado yaa caan ku noqon lahaa mambo adduunka oo dhan. Wuxuu tan ku sameeyay adoo ballaadhiyay tirada ciyaartoyga kooxda muusikada isla markaana ku daray waxyaabaha caadiga ah ee Jazz Waqooyiga Ameerika sida buunka, saxafadaha, iyo laba baaska
Dabeecad ayaa sidoo kale ka dhigtay mid gaar ah ka soo horjeedka taasi waxay jirka ka dhigtay inuu u dhaqaaqo garaacistiisa. Horeba kontomeeyadii qarnigii labaatanaad, dhowr fannaaniin ayaa u wareejiyay mambo New York kana dhigaysa dhacdo caalami ah oo dhab ah.
Sidoo kale ku dhashay CubaAsalkiisu waa si sax ah in laga helo saamaynta mambo. Waxaa jiray dhaanto aan ku qanacsaneyn laxanka frentinimada ee qoob ka ciyaarka uu baahiyay Pérez Prado. Marka waxay raadinayeen wax deggan oo taasi waa sida ay ugu dhalatay cha-cha oo leh deganaansho deggan iyo laxanno soo jiidasho leh.
Gaar ahaan, abuuritaankeeda waxaa loo aaneynayaa muusikiiste caan ah iyo laxamiiste Enrique Jorrín, kaas oo sidoo kale kor u qaaday muhiimada ereyada ay sameeyeen kooxda muusikada oo dhan ama heesaha kali ah.
Sida laga soo xigtay khubarada, muusigani wuxuu isku daraa xididdada Cuban danzón iyo tiisa Mambo, laakiin waxay bedeshaa riyadeeda meeriska iyo qaafiyadda. Intaa waxaa dheer, waxay soo bandhigeysaa xubno ka mid ah schottische ka yimid Madrid. Dhanka qoob ka ciyaarka laftiisa, waxaa la sheegay in ay abuureen kooxdii ku duubtay naadiga Silver Star ee ku yaal Havana. Raadkiisa ayaa dhawaq ka sameeyay dhulka oo u muuqday seddex dharbaaxo oo is xigxigay. Oo isticmaalaya onomatopoeia, waxay ku baabtiisay astaamaha sida "Cha Cha Cha".
Cumbia, hidaha Afrika
Si ka duwan tii hore, cumbia waxaa loo arkaa mid dhaxli doona qofka qoob ka ciyaarka afrikaanka yaa America geeyey kuwii addoonsiga loo raray. Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale leedahay walxo asal ah iyo Isbaanish ah.
In kasta oo maanta laga dheesho adduunka oo dhan isla markaana ay ka hadlayaan Argentine, Chilean, Mexico iyo xitaa Costa Rican cumbia, asalka qoob-ka-ciyaarkan waa in laga raadiyaa dhulalka Kolombiya iyo Panama.
Natiijada isku-dhafka aan ka hadlaynay darteed, durbaannada waxay ka yimaadaan substrate-keeda Afrika, halka qalabka kale sida maracas, pitos iyo gouache Waxay asal ahaan ka soo jeedaan Mareykanka. Taabadalkeed, dharka ay xirtaan qoob-ka-ciyaarayaashu waxay ka soo jeedaan nooca qadiimiga ah ee Isbaanishka ee dharka.
Laakiin waxa noogu xiisaha badan qodobkan, oo dhaansiga sidaas oo kale ah, wuxuu leeyahay xididdo dhab ah oo Afrikaan ah. Waxay soo bandhigeysaa damqasho iyo jaangooyooyin caadi ah oo ka mid ah qoob ka ciyaarka oo weli laga heli karo maanta wadnaha Afrika.
Sidoo kale waa ciyaar dhab ah Dominican laakiin la gaarsiiyay adduunka oo dhan. Waxay ka soo bilaabatay lixdameeyadii qarnigii labaatanaad rhythmic bolero, inkasta oo ay iyaduna soo bandhigayso saamayn ka merengue iyo waa cuban.
Intaa waxaa sii dheer, bachata qaar ka mid ah aaladaha caadiga ah ee qaafiyadaas ayaa la beddelay. Tusaale ahaan, maracas ee bolero waxaa beddelay güira ah, sidoo kale ka tirsan qoyska garaaca, oo la soo bandhigay gitaarka.
Sida ku dhacday qoob-ka-ciyaarka kale ee badan, bachata waxaa loo tixgeliyey bilowgeeda inay tahay qoob-ka-ciyaarka fasallada ugu hooseeya. Markaa waxaa loo yaqaanay "Muusikada qadhaadh", taas oo tixraac ka bixisay jahwareerka ka muuqday mowduucyadooda. Waxay hore u ahayd sideetameeyadii qarnigii labaatanaad markii sifadu ku fiday aduunka ilaa ay UNESCO u kala saartay Dhaxalka aan la taaban karin ee Aadanaha.
Dhinaca kale, taariikhdeeda oo dhan, bachata wuxuu u kala jabay laba subgener. Ku tecnoamargue ka mid ahaa. Waxay isku darsatay astaamaha qoob-ka-ciyaarkan iyo muusikada laga sameeyay aaladaha elektarooniga ah iyadoo lagu milmay noocyo kale sida jazz ama dhagax. Bandhigiisii ​​ugu fiicnaa wuxuu ahaa Sonia Silvestre.
Subgenre labaad waa waxa loogu yeero bachata casaan, kaas oo helay sumcad aad u badan oo adduunka oo dhan ah. Waa nagu filan tahay inaan kuu sheegno in shakhsiyaadkiisa waaweyni ay yihiin Victor Victor iyo, dhammaan, Juan Luis Guerra si aad u ogaatid. Xaaladdan oo kale, waxaa lagu daraa kan Ballad jacayl ah.
Marka laga hadlayo nooca, waqtigeeda ugu weyn waa heesaa Mareykan ah oo asal ahaan ka soo jeeda Dominican Romeo Santos, marka hore kooxdaada, Aventura, oo hadda kaligaa.
Qoob-ka-ciyaarka kale ee caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka ugu caansan
Qoob-ka-ciyaarka aan illaa hadda kuu sheegnay waa kuwa laga yaqaan Kariibiyaanka, laakiin waxay ka soo gudbeen dhulkeeda si ay caan uga noqdaan adduunka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira ciyaaro kale oo aan ku guuleysan dibedda, laakiin si weyn looga jecel yahay aagga Kariibiyaanka.
Waa kiiska wadajirka ah, oo asalkoodu ka soo jeedo geyiga Colombia kahor imaatinka Isbaanishka. Waxay isku darsameysaa saameynta ka imanaya dhuumaha hooyo ee leh laxanka Afrika waxayna leedahay qayb sasabasho cad leh. Waqtigaan la joogo waa qoob-ka-ciyaar qoob-ka-ciyaarka oo leh lilil iyo laxanka xafladda. Si ay u dheesho, badiyaa way qaataan dharka gumeysiga caadiga ah. Sidoo kale ka tirsan qoob-ka-ciyaarka noocan ah ayaa ah fandango, taas oo aan shaqo ku lahayn magaceeda Isbaanishka. Asal ahaan waxay ka timid magaalada Bolivia ee Sucre, si dhakhso leh ugu faafay Urabá reer Colombia. Waa wadiiqo farxad leh taas oo, si xiiso leh, haweenku u qaataan shumacyo si ay u diidaan shukaansiga ragga.
Xididdada Afrika ee cad ayaa leh mapalé. Dhaantan, waa durbaanka iyo qofka soo wacaya ee dhigaya laxanka. Asalkiisu wuxuu la xiriiray shaqo, laakiin maanta waxay leedahay dhawaq xafladeed oo aan la inkiri karin. Waa qoob-ka-firfircoon oo firfircoon, oo ay ka buuxdo waxyaabo qalaad.
Ugu dambayn, waanu kuu sheegi doonaa bullerengue. Sida qoob-ka-ciyaarka kale ee caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka, waxaa ku jira qoob-ka-ciyaarka, heesta iyo tarjumaadda laxanka leh. Tan dambe waxaa lagu fuliyaa oo keliya durbaannada iyo calaacasha gacmaha. Dhinaceeda, heesta waxaa marwalba sameeya dumarka waxaana qoob ka ciyaarka wada qaada labada lamaane iyo kooxaha.
Gabagabadii, waxaan kaaga warranay qaar ka mid ah qoob-ka-ciyaarka ugu caansan Kariibiyaanka. Kuwii ugu horreeyay ee aan kuu soo sheegnay waxay ku guuleysteen sumcad iyo caannimo caalami ah. Dhinacooda, kuwa dambe ayaa si isku mid ah looga yaqaan gayiga lagu sameeyo, laakiin waa ka yartahay adduunka intiisa kale. Sikastaba xaalku ha ahaadee, kuwo kale oo badan ayaa jira qoob ka ciyaarka caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka. Dhexdooda, waxaan ku xusi doonnaa gudbinta farota, qoraa, waxaa keenay Ameerika Isbaanishka, ama Waan noqon doonaa waan ogahay-waan ogahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » dhaqanka » Ciyaaraha caadiga ah ee gobolka Kariibiyaanka